Wasiirka maaliyadda oo shaaciyay in wax mushaar ah aysan laheyn xildhibaanada Aqalka sare – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiirka maaliyadda oo shaaciyay in wax mushaar ah aysan laheyn xildhibaanada Aqalka sare
Wasiirka maaliyada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti ayaa shaaciyay in xildhibaanada Aqalka sare ee baarlamaanka aysan heli doonin mushaarka iyo gunnada seddexda bilood ee ugu horeysa sanadka 2017-ka.
Wuxuu wasiirka arrintaasi u sababeeyay inay ugu wacan tahay in mushaaraadka la siin lahaa xildhibaanada labada Aqal aysan ku jirin miisaaniyadda seddax biloodlaha ah ee hore loo diyaariyay.
Wasiirka ayaa ku dooday in miisaaniyadda la diyaariyay sanadkii lasoo dhaafay ee 2016-ka aysan ka mid aheyn mushaarka xildhibaanada aqalka sare, sidaas awgeed sida uu sharcigu uu qabo ay tahay in seddaxda bilood ee soo socota xukuumadda ku shaqeyn doonto miisaaniyaddii 2016-ka.
“Seddaxda bilood ee soo socoto waxay xukuumaddu ku shaqeyn doontaa miisaaniyaddii xildhibaanada ay ansixiyeen sanadkii 2016-ka, micnaheedu wuxuu yahay in meesha uu ka baxaayo xuquuqda mushaaraadka ah oo ay lahaayeen xildhibaanada Aqalka sare” Sidaasi waxaa yiri wasiir Fargeeti.
Dhinaca kale, ilaa iyo haatan ma jiro wax jawaab ah oo ay xildhibaanada Aqalka sare ka bixiyeen hadalka kasoo yeeray wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti, iyadoona aan la ogeyn sida ay arrintu ku dambeyn doonto.